ကုမ္ပဏီနိဒါန်း-NANTONG GAOYA သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ CO ။, , LTD.
Market က Dynamic
NANTONG GAOYA သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ CO ။, , LTD.ဒီဇိုင်းအတွက်အထူးပြု,အဆောက်အဦးအမျိုးအစားကိုထုတ်လုပ်လုပ်ပြီး install,နှင့်အခြားစီးရီး.
Nantong Gaoya သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ CO ။ , Ltd မှ. အကြမ်းခံပေး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအတူ 1996 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ချွေတာအဆောက်အဦဖြေရှင်းနည်းများ,နှင့်ဖောက်သည် '' စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိအာရုံစိုက်.
ဒါဟာအဆက်မပြတ် AAA ဘဏ်ချေးငွေလုပ်ငန်းအဖြစ် rated ကြောင့်လည်းတရုတ်အင်ဂျင်နီယာဆောက်လုပ်ရေးကြီးကြပ်၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးရဲ့နေသည် & စီမံခန့်ခွဲမှု Association.What ရဲ့ပိုပြီး,Gaoya အဆိုပါ EN1090 တယ်ထားပါတယ် (ဥရောပစံ) သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံထုတ်လုပ်မှုလက်မှတ်, ISO ကို 9001:2008 အရည်အသွေး System ကိုလက်မှတ်,အဖြစ်က ISO 14000 ပတ်ဝန်းကျင် System ကိုလက်မှတ်.
အခုတော့ Gaoya ဒီဇိုင်းအတွက်အထူးပြုတဲ့ professional ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်,အဆောက်အဦးအမျိုးအစားကိုထုတ်လုပ်လုပ်ပြီး install,ရေယာဉ်,တံတား,လျှပ်စစ်ထုတ်လွှင့်မျှော်စင်သံမဏိအဆောက်အဦများ,ထိုသို့ကိုလည်းသံမဏိငြမ်းများရောင်းချမှုနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်စေ့စပ်ရဲ့,ဝါယာကြိုးသည် frame,တံခါးများ,ပြတင်းပေါက်,ဟာ့ဒ်ဝဲအစိတ်အပိုင်းများ, tools တွေ, လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ,အလှဆင်ပစ္စည်းများ,သံမဏိစာရွက်စသည်တို့ကို,ကပြည့်စုံခေတ်မီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်လာစေရာ. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သစ်ကိုစျေးကွက်အယူအဆ၏,မြင့်မားတဲ့ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးနှင့်ရိုးသားသောဝန်ဆောင်မှု, Gaoya ဖောက်သည်ထံမှချီးမွမ်းစာရေးအနိုင်ရ.
တည်ထောင်ကတည်းက,Gaoya adhering to the "quality to create value, တိုက်မြစ်အဘို့ကောင်းသောယုံကြည်ခြင်းတရားကို,အောင်မြင်မှုအနိုင်ရလုံ့လဝီရိယ, ဖှံ့ဖွိုးတိုးတရှာဆန်းသစ်တီထွင်မှု" စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒဿန, adhere to the "social development as its mission,centennial enterprise people-oriented"purpose,ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားဒီဇိုင်းနှင့်အတူ, ခေတ်မီကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသင်း, Gaoya ပိုကြီးနှင့်ပိုမိုအားကောင်းစေရန်တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးအမှုစနစ်.
Gaoya ၏သမ္မတအဖြစ်,လူအပေါင်းတို့သည်န်ထမ်း, E-mail ဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရန်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်မိတ်ဆွေများကိုကြိုဆိုပါတယ်နှင့်အတူ Bao Yajun မစ္စတာ ,တယ်လီဖုန်းများနှင့်ဧည့်.
မူပိုင်ခွင့်© NANTONG GAOYA သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံ CO ။, , LTD ။. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.